आज शनिबार, २०७८ बैशाख २५ को राशिफल – Asal Kura
गृहपृष्ठ आज शनिबार, २०७८ बैशाख २५ को राशिफल
आज शनिबार, २०७८ बैशाख २५ को राशिफल
वैशाख २५, २०७८ |
ज्यो. पं युवराज अधिकारी । आज मिति २०७८ बैशाख २५ गते शनिबार । तदनुसार ८ मे २०२१ । श्री शनिदेवको दर्शन गरी आजको पञ्चाङ्ग र राशिफल हेर्नुहोस ।
वि.सं. वैशाख २५, २०७८ । ई.सं. 07 May, 2021 । शक संवत् १९४३ । नेपाल संवत् ११४१ चौलागा । उत्तरायण । ऋतु – वसन्त । वार – शनिवार । वैशाख कृष्णपक्ष । तिथि – द्वादशी, १८:४९ बजे उप्रान्त त्रयोदशी । नक्षत्र – उत्तरभाद्रपदा, १६:२८ बजे उप्रान्त रेवती । योग – विष्कम्भ, २१:३९ बजे उप्रान्त प्रिती। करण – कौलव ६:१७ बजेदेखि तैतिल, १८:४९ बजे उप्रान्त गर। चन्द्रराशि – कुम्भ । आनन्दादि योग – ध्वज । दिनमान ३३ घडी ०५ पला । सूर्योदय ५:२१ । सूर्यास्त १८:४० । पञ्चक, रेडक्रस दिवस ।
मानसिक तथा शारीरिक समस्याले सताउने छ । धनक्षय हुने दिन रहेको छ । बहुमुल्य सामान हराउन सक्नेछ । काममा बाधा व्यवधन आउने छ । कुरा काट्नेहरु प्रसस्त भेटिनाले अपयश मात्र हात लाग्नेछ । अध्ययनमा मन जानेछैन । अनावश्यक यात्राहरु हुनेछन् । व्यवसायमा घाटा होला ।
आर्थिक उन्नति प्रगतिहुने दिन रहेको छ । पराक्रम बढने तथा काममा सफलता मिल्नाले मन प्रसन्न रहनेछ । इष्टमित्रसंग भेटघाट हुनेछ । यात्रा तथा धनलाभहुने दिन रहेको छ । व्यवसायबाट फाइदा हुने दिन छ । आफन्तबाट प्रसस्त मात्रमा सहयोग प्राप्त हुनेछ । अध्ययनको क्षेत्र सफल रहनेछ ।
आज कुनै नयाँ कामको थालनि हुनेछ । आज ऐश्वर्य प्राप्त हुनेछ । मनले चिताएको काममा सफलता मिल्ने योग छ। इष्ट सिद्धि हुनेछ । रोकिएका कामहरु पुरा हुनेछन् । तिव्रतापूर्वक काम गर्दा वेस हुनेछ । कर्मको फल प्राप्त हुनेछ । विद्यार्थी तथा व्यापारीहरुका लागि आजको दिन विशेष फलदायी रहनेछ ।
परिवार तथा सन्तानबाट असहयोग प्राप्त हुनेछ । अध्ययनमा रुचि वढनेछ । व्यापार व्यवसायमा राम्रो फाइदा हुने दिन रहेको छैन । सरकारी काममा झमेला हुनेछ । रोजगारी तथा व्यवसायबाट फाइदा हुनेछैन । पेटमा वायुविकार जन्य समस्या आउनेछ । खानपानमा विशेष सतर्कता अपनाउनु होला ।
स्वास्थ्य सम्वन्धी समस्याले सताउनेछ । वादविवाद तथा झगडा हुन सक्नेछ । मन साह्रै चिन्तित रहला । आज खर्चमा वृद्धि हुनेछ । वादविवाद हुन सक्नेछ सतर्क रहनु होला । जिवजन्तुको भए रहनेछ । अध्ययन तथा वैतनिक मार्ग फलदायी रहने छैन । आज नयाँ कामको थालनि नगरेकै राम्रो हुनेछ ।
धनलाभ हुने दिन छ । यात्रा तथा सवारी साधनबाट फाईदा हुनेछ । मीठो कुरा खानपाईने दिन रहेको छ । मित्रबाट पूर्ण सहयोग मिल्नेछ । परिवारबाट सहयोग मिल्नेछ । व्यवसायबाट प्रसस्त आम्दानी हुने दिन रहेको छ । मान-प्रतिष्ठा बढ्ने योग छ । पढाइमा सफलता मिल्ने दिन रहेको छ ।
व्यवसायबाट फाईदा हुनेछ । स्वास्थ्यले साथ दिनेछ । श्रीवृद्धि तथा यश प्राप्त हुनेछ । शत्रु सरास्त हुनेछन् । विपरीत लिंगीसंगको कुराकानिले मन साह्रै प्रसन्न हुनेछ । मनले चिताएको काम पुरा हुनेछ । प्रेममा सफल हुने दिन छ । विद्यार्थीका लागि अध्ययन क्षेत्र फलदायी रहेका छन् ।
धनक्षय(अपव्यय) हुनेछ मेहनतसाथ गरेको काम सफल हुनेछैन । यात्रा अर्थपूर्ण नहोला । मन अशान्त रहनेछ । धन तथा सामान हराउन सक्नेछ सजगता अपनाउनु होला । व्यापार व्यवसायबाट त्यति आम्दानी हुनेछैन । विद्यार्थीहरुका लागि आजको दिन त्यति फलदायी हुनेछैन ।
परिवारका सदस्यहरुसंग मतभेद हुन सक्ने योग छ । मन साह्रै चञ्चल हुनेछ । पेट सम्वन्धी समस्या आउने छ । अनावश्यक खर्चमा वृद्धि हुनेछ । आज नयाँकामको थालनि नगरेको राम्रो काम विग्रनेछ । मन अस्थिर रहनेछ । काममा सफलता मिल्ने छैन । अध्ययन तथा वैतनिक क्षेत्र अशुभ रहने छ ।
धन आर्जनगर्ने अवसर मिल्नेछ । शत्रु परास्त हुनाले मन प्रशन्न हुनेछ । मित्रहरुको साथ र सहयोग प्राप्त हुनेछ । प्रेममा सफल हुने योग छ । उपहार प्राप्त हुनेछ । आजको दिन सुखद् तथा प्रेमिलरुपमा व्यतित हुनेछ । विद्यार्थी भाइबहिनीहरुका लागि आजको दिन राम्रो रहेको छ ।
शरीरमा समस्या आउन सक्नेछ । मनमा असन्तोष बढनेछ । स्वास्थ्य सम्बन्धि समस्या देखिनेछ । अनावश्यक रुपमा धनक्षय हुनेछ । आज कटुवचनको प्रयोग नगर्नुहोला । अनावश्यक रुपमा विवाद उत्पन्न हुन सक्नेछ । आँखाको समस्याले सताउनेछ । खानपानमा ख्याल गर्नुहोला ।
स्वास्थ्य राम्रो रहने छ । मनमा सुखको अनुभुति हुनेछ । सभा तथा समारोहमा सहभागि हुने अवसर मिल्नेछ । पारिवारीक सुख प्राप्त हुनेछ । स्वादिष्ट भोजन तथा उपहार प्राप्तहुने योग रहेको छ । अन्नलाभ हुनेछ । विद्यार्थीहरुको अध्ययनको क्षेत्र राम्रो रहनेछ । व्यवसायवाट प्रसस्त आम्दानी होला ।
पछिल्लाे - कोरोनाको खोपमा भ्रष्टाचार गर्नु क्षमा दिन नमिल्ने अपराध हो : देउवा
अघिल्लाे - कांग्रेसले दियो पार्टी कार्यालय, कोरोना अस्पतल निर्माणका लागि